२०७८ बैशाख ११ शनिबार १५:०७:००
०४० तिर निजी क्षेत्रले पनि बैंक खोले । त्यतिखेर आएका बैंकहरूले एकजना व्यक्तिले अधिकतम ५० कित्ता सेयर खरिद गर्न पाउने सीमा तोकेर जारी गर्दथे । बैंकको सेयरमा भने मानिसहरू आकर्षित भए । ०४२ तिर सरकारी संस्थानहरू पनि निजीकरण गर्ने अभ्यास सुरु भयो । यही पहलका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले राष्ट्रिय बिमा संस्थानको सय अंकित मूल्य भएको सेयर चार सय १५ मा बिक्री गरिएको थियो । यसमा पनि प्रतिव्यक्ति ५० कित्ता किन्न सकिने व्यवस्था नै गरिएको भए पनि जारी सेयरको ८÷१० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बिक्री भयो । प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विषय त झन् नौलो भएको थियो । बुझेकाहरूले किने पनि धेरैले भने खरिद गरेनन् ।
नेपाल औद्योगिक विकास बैंक (एनआइडिसी)ले पनि सेयर बिक्री गर्‍यो । नोक्सानमै रहे पनि हामी केहीले यसको सेयर खरिद गर्‍यौँ । हामीले पुँजी बजारको विकासमा यो संस्थाले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर कुरा राख्यौँ । तत्कालीन बैंकको अध्यक्षसमेत रहेका अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईसँग हामीले प्रस्ताव गर्‍यौँ । ऐनमा व्यवस्था नै थिएन । अमृतनाथ रेग्मी र म भएर ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्‍यौँ ।
०४९ मा एनआइडिसी क्यापिटलले पनि एउटा संगठित प्लेटफर्मका रूपमा काम गर्‍यो । जर्मनको डेज संस्थाले सिए वाल्टर डिलर भन्नेलाई यसको प्रमुख बनाएर पठाएको थिए । उनीहरूले पनि बजारको प्लेटफर्म विकास गर्ने काम गर्न थालेका थिए । तर, ०५० मै धितोपत्र खरिद–बिक्री केन्द्रले सेयर कारोबारका लागि प्लेटफर्म दियो । यद्यपि, त्यसवेलासम्म पनि परम्परागत प्रक्रियामै कारोबार हुन्थ्यो ।
अहिले कारोबारमा प्रयोग भइरहेको पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको छ । कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस)ले काम राम्ररी काम नगर्दा समस्या हुने गरेको छ । अहिलेको प्रणाली उच्चस्तरको छैन । यो प्रणाली ल्याउँदा अहिले जति लगानीकर्ताको चाप अनुमान गरिएको थिएन होला । तर, यो प्रणालीमा सुधार आवश्यक नै भएको छ ।
अहिले हामी मुलुकभित्रकै संस्थाहरूको मात्र कारोबार गरिरहेका छौँ । हामी सेयरबजारमा समेत वैदेशिक लगानी भिœयाउने कुरा गरिरहेका छौँ । हालसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र क्लोज्ड नै छ । भोलिका दिनमा हामी क्षेत्रीय अर्थतन्त्र वा विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएर जानैपर्छ । यो रोकेर पनि रोकिँदैन, अपरिहार्य नै छ । अहिले भइरहेको ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई पनि केही सुधार गर्नैपर्छ ।
संस्थाहरू बजारमा सूचीकृत हुन आउँदा यसका सञ्चालक, व्यवस्थापकको पनि ख्याति स्थापित हुन जान्छ । कम्पनीले कायम गर्ने उच्चतम सेयर मूल्यलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने चुनौती सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई हुन्छ । यसले पनि कम्पनीलाई थप प्रतिस्पर्धी हुन सघाउँछ भने कम्पनी थप उत्पादनशील बन्छ । अहिले सेयर जारी गर्दा बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अपनाउन थालिएको छ ।
अंकित मूल्यभन्दा बढी हुने रकम त संस्थाले नै पाउँछ । संस्थाले त्यो पुँजीले थप विस्तार हुने अवसर पाउँछ । व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले कुनै एक व्यवसायमा कमाइ ग¥यो भने यसले अन्य व्यवसायमा पनि लगानी बढाउन उसलाई प्रोत्साहित गर्छ । पुनर्लगानीका लागि सरकारले पनि प्रोत्साहनसमेत गर्नुपर्छ ।
कम्पनीहरूले कमाएको बाँडेरै मात्र सक्न दिनुहुँदैन । थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । धिरुभाइ अम्बानीकै उदाहरण हेरौँ, केही समयअघिसम्म उनको भारतीय अर्थतन्त्रमा पाँच प्रतिशतसम्म योगदान थियो । विश्वप्रसिद्ध सेयर लगानीकर्ता वारेन बफेटले पनि पुँजीबजारबाट कमाएको पैसाले व्यवसाय विस्तार गरेका छन्, च्यारिटीमै पनि राम्रो खर्चिन्छन् ।
एक–दुई प्रतिशत मानिस होलान् जो सम्पत्ति वा व्यवसाय वृद्धिको पछि लाग्दैनन् । तर, अन्यले त कमाएको पैसाले केही न केही गर्ने र व्यवसाय वृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहन्छन् । अर्बपति व्यवसायी वा यसका लागि प्रयासरत व्यवसायीले पनि आफ्नो सबै कमाइ त आफ्नै लागि सक्ने त होइन । यसले अर्थतन्त्रलाई नै वृद्धि गर्ने हो । पहिले धेरैले बचतमा रकम राख्ने प्रवृत्ति थियो । त्यसमा कमी आएको छ ।
राम्रो प्रतिफल दिइरहेका कम्पनीका संस्थापकहरूले अन्य कम्पनी स्थापना गरेमा त्यसको पछि को जाँदैन र ? त्यसैले सेयर बजारले ठूला लगानीकर्तालाई व्यवसाय विस्तार गर्न र साना लगानीकर्तालाई यस्तो व्यवसायमा सहभागी गराउन भूमिका खेल्छ ।
पुँजी बजारमा सट्टेबाजी त हुन्छ । यो कुन हदसम्म हुनुपर्छ भन्ने नियामक निकायले निक्र्योल गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले मूल्य–आम्दानी अनुपात हेर्ने हो भने कुनै कम्पनीको एक रुपैयाँ कमाइलाई लगानीकर्ताले ४० रुपैयाँ पनि हालिरहेका छन् भने २० रुपैयाँ मात्र पनि तिरिरहेका छन् । राष्ट्रिय बिमा संस्थानकै उदाहरण हेर्ने हो भने ३५ वर्षअघि चार सय १५ हालेर एक कित्ता मात्रै किन्नेको अहिले ९ लाखको सम्पत्ति बनेको छ । त्यतिखेर एक सयमा अन्य संस्थाको सेयर पाइरहँदा यसको चार सय १५ रुपैयाँ त धेरै हुन्थ्यो नि ! त्यसैले कतिपय मूल्यको औचित्य भविष्यमा गएर पुष्टि हुन्छ ।
अहिले कुनै पनि संस्था डुब्ने अवस्थामा छैन । केही समयअघि केही वाणिज्य बैंकसमेत डुब्न लागेका थिए । अहिले यी संस्थाले पुनर्जीवन पाएर अगाडि बढेका छन् । अहिलेको बजार मूल्यमा सेयर किन्ने पनि डुब्ने अवस्था देखिँदैन । पहिले जतिखेर अस्वस्थ सट्टेबाजी थियो, सो समयमा मानिसहरू डुब्ने अवस्था थियो । अब त्यस्तो अस्वस्थ सट्टेबाजी हुने अवस्था म देख्दिनँ । अहिले सूचना प्रवाह प्रणाली निकै बलियो बनेको छ । हरेक कम्पनीबारे लगानीकर्ताले सूचना पाइरहेका छन् । लगानीकर्ताले विश्लेषण गरेर मूल्य लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्न पाएका छन् ।
अबको केही वर्षभित्र एयरलाइन्स कम्पनीहरू पनि बजारमा सूचीकरणका लागि आउनेछन् । एउटै व्यवसायमा मात्र नबसेर यी संस्थाले सम्बन्धित क्षेत्रमा सहयोगी हुने अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्दै जान्छन् । किनभने कर्पोरेट सेक्टर जहिले पनि वृद्धिको अपेक्षामा अगाडि बढ्छ । मानव संसाधन, अनुसन्धानलगायतमा खर्च गर्दै अगाडि बढ्ने क्षेत्र यही हो । अहिलेकै प्रक्रियामा कर्पोरेट सेक्टर अगाडि बढ्ने हो भने बिदेसिएका नेपालीले पनि यहीँ रोजगारी भेट्नेछन् ।
पाँच वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयसमेत पाँच हजार डलर पुग्ने सम्भावना छ । सरकारले पनि यसका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले तिर्ने पुँजीगत लाभकर र लाभांश कर एक प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । बजारमा सूचीकृत हुने संस्थाहरूको कर्पोरेट कर अहिलेको २५ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यसो भएमा संस्थाहरूले नयाँ–नयाँ काम गर्न सक्नेछन् भने सरकारले समेत नयाँ जन्मिने संस्थाबाट कर पाउनेछ । त्यसैले दर होइन दायरा बढाउने सोचमा सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ ।